I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1? : UMartin Vrijland
Kubalulekile ukuba sixoxe nge-Q Anon kwakhona, kuba uninzi lubonakala lukholelwa koko kutshiwo ziifayile ze-Q Anon. Bakholelwa ukuba kukho imeko enzulu ukuba uTrump ayicace. Isikhundla sam ngu: Kukho indawo ebanzi kakhulu ebandakanya uTrump kunye no-Q Anon.
Lo mdlalo 'wokwenza izinto ezimbini' uhlala uchazwa apha kule ndawo kwaye ubizwa ngokuba 'yinkcaso elawulwayo'. Kutheni kungekho namnye kwelinye ilizwe elinamajelo osasazo othetha malunga nolawulo oluchaseneyo ngaphandle kwesixa sokuthuka ngemipu kwabo basasaziweyo? Kuba sisifundo ekufuneka sihleli phantsi kwekhaphethi?
Eyona ndlela yokukhokela ubuntu kukufumana ukuqonda. Ukwazi ukuba abantu ngokwemvelo banenqanaba lokuthandabuza, ufuna nokubamba iqela eliphikisayo.
Ukuqala kwam le webhsayithi ngoNovemba ka-2012, ndikhawuleze ndayiqala indlela yokuhlaselwa kwakho nzima kangaka njengomphambukeli, ukuba ulahlekelwe yinto yonke kwaye unomdla wokuyikhupha. Ngelishwa, indlela endisabele ngayo ibingulowo uguqukayo. Ndagqiba kwelokuba: Ukuba awunanto yokulahleka, qhubeka de kube sekupheleni. Kungcono ndifele emkhombeni kunokuba ndinikezele kwaye ndilale ngomqolo kum.
i Umkhosi wemidiya yoluntu (nto leyo ngokucacileyo inkulu kunomkhosi ophethe izixhobo kunye neyunifom) ngoku ilungele ukuhlasela nabani na onenkcaso evela kwindawo ephambili okanye elawulayo.
Kutheni u-Q Anon kunye nabapapashi abaninzi beli bali le-Q Anon, nokuba kungavulwa (Janet Ossebaard) okanye osongelwe (Robert Jensen), ngombono wam njengomnatha wokhuseleko, ndicacisile ngokweenkcukacha ngaphakathi eli nqaku. Izolo ndongeze oku kulandelayo kuFacebook:
Sihamba ngenyawo ukuya kulawulo lobuzwilakhe. URutte noGrapperhaus sele belumkisile kwimidiya yabo. Njengoko kwakuxelwe kwangaphambili, uTrump (US), uBolsonaro (eBrazil) kunye noBoris Johnson (e-UK, ngoku novavanyo-oluzimeleyo) baya kuchongwa njengezityholo: "abo babukela phantsi i-coronavirus."
Oko kungakhokelela ekuphumeleleni kweTrump. Ibali le-Q ka-Anon kaJanet Ossebaard kunye nekhonkco phakathi 'kokucingisisa"ngokusebenzisa i-pawns enje ngeJensen, ukuya kuTrump, emva koko bayakuhlawula bonke abo bagxekayo (yabona inqaku elidityanisiweyo Inkcazo yesicwangciso esiliqili sokuphepha). Ziya kutyunyuzwa kwindawo enye ewile.
Ke nabani na ozimisele ukugxeka amanyathelo angqongqo okuvalwa - inyanzeliso yokhathalelo lwempilo yengqondo ngokusebenzisa ibala ODD (Umphikisi weOpstandig Gedrag) - uya kuba phantsi kononophelo lwezempilo yengqondo. Ke ii-psycholances zinokuqala ukuqhuba (njalo njalo).
Bopha i-Holland, kuba inkululeko iya kuba yinto emnandi ...
Ewe ufunda elo lungelo. Ndithatha isikhundla sokuba uDonald Trump, Jair Bolsonaro kunye noBoris Johnson bamele uphawu lwenxalenye yeqela eliphikisayo. Ngabo abadlala i-coronavirus, nangona kunjalo beza neendlela zokutshixa okwangoku. Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba amajelo eendaba kunye nehlabathi elingaphandle, kubandakanya iWorld Health Organisation (WHO), bakholelwa ekubeni akukho nzima ngokwaneleyo ukwenza isenzo. Abantu kufuneka babe kukutshixa okugcweleyo okunamandla.
"Kodwa asibonanga kunyuka okunyanzelekileyo ukuba kwenziwe uvavanyo, ukuhlala yedwa kunye nokutsala umnxeba, oku kungumqolo wempendulo," utshilo.
“Sinomyalezo olula kuwo onke amazwe: Uvavanyo, uvavanyo, uvavanyo. Vavanya onke amatyala atyholwa. Ukuba bavavanya ukuba banayo, bahlukanise kwaye bafumanise ukuba ngubani odibene nabo kwiintsuku ezimbini ngaphambi kokuba babe neempawu kwaye bavavanye abo bantu, " UTedros wathi.
Umongameli wase-Bolivia u-Bolsonaro ucinga ukuba intsholongwane ye-hype yeendaba nje kwaye uDonald Trump kufuneka ancede ukuxhasa ibali lika-An An. Kuthiwa ucoca indawo enzulu usebenzisa intsholongwane ye-corona. Ngenxa yeso sizathu, ngoku uza kudlala umdlalo ngokusemandleni akhe kwimithombo yeendaba ezingezizo (yile ngcinga Q). U-Boris Johnson usulelekile yena, kodwa eneneni ungenelelo olunobuthathaka e-UK.
INetherlands yimeko ekhethekileyo. Rutte & co. Landela isicwangciso esiliqhinga endikholwa ukuba silikhokelela kwimeko ephume esandleni. Nangona kunjalo: URutte uya kuba nako ukugqithisa ibhola ngokufanelekileyo ngaphandle kwesimo soqikelelo oluchanekileyo kwisicwangciso se-RIVM. Konke kuyo yonke le nto, ngokuqinisekileyo kuniphunga lokungafaniyo kwindlela; apho kukho isikhalo esikhulu sokuvuma urhulumente wehlabathi.
Ndiyakholelwa ukuba u-Q Anon yindlela ecacileyo yokuchaswa. Ndikhuphele ividiyo yomnye wabashumayeli uQ Anon ongezantsi ukusuka ngexesha endifuna ukugxininisa kuwe. Vumela isicatshulwa ukuba singene kakuhle. Lo kaSean Morgen uthi oku kulandelayo:
"Sinolwazi oluvela kuQ olukhomba kwicala elifanelekileyo lokucinga malunga ne-coronavirus kwaye luhlobo luni lwamanani lokujonga phezulu kunye nohlobo lwezinto-ezinje ngohlobo lophando-ekufuneka silwenzile ukuzama ukufumana emazantsi eli ”
Inkcaso elawulwayo ikuxelela ukuba yeyiphi indlela yokucinga. Leyo yinkcazo entle yolawulo lokuqonda. Imithombo yeendaba eyintloko yenza oko ngokuzabalaza, kuphela inkcaso ekwenza ucinge ukuba uTrump, Bolsonaro, BoJo kwicala, ukuze ukwi-net yokhuseleko. Ke xa unyukelwe kwinqanawa yomnatha yokhuseleko, inkohliso enkulu iyalandela kwaye isikhululo seenqwelomoya. Emva koko abantu abantywilisiweyo banokucekiswa kwaye, emva kwemfundo efanelekileyo yokufunda, bathathe indawo yabo kumgangatho weenqanawa zobunqolobi.
Ukuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?
Kuthekani ngokudutyulwa kwe-intanethi okuza kubakho nge-1 ka-Epreli ngokutsho kwabahambisi bevangeli u-An An? Ewe, ukuba inkcaso elawulwayo iyayibhengeza, inokwenzeka kakhulu. Ngokufanelekileyo ezo pilisi zichasayo zilawulwa ziya kunika i-alibi eyenzelwe oko. Banikezela ukugxekwa ngokusekwe kwinyaniso ekwaziyo exutywe nemigibe kwaye bayadityaniswa neenkokeli ezingazenzi nzima ngokwaneleyo.
Ndivale isithuba sam esikuFacebook esikhankanyiweyo ngezantsi.
Kodwa! Ndiyayenza! Likhona ithemba! Ke ngoko, funda incwadi yam kube kanye. Sukumamela ii-IMB'ers ukuzama ukundinqumla. Thatha ixesha lakho ukufumana ukuba yintoni iskripthi esiyingcali kunye nokuba ukuqikelela kwam konke kuyinyani. Ewe konke oku kuyafumaneka simahla kwisiza sam, kodwa ngenxa yokufundeka kunye nokucelwa ngabafundi abaninzi ndiyishwankathele encwadini. Uyawuxhasa nomsebenzi wam. Masomelele!
Kwimeko yokuqunjelwa kwe-intanethi kubalulekile ukuba ube nencwadi (yephepha) elisezandleni zakho. Yonke into endiyibhalileyo encwadini yam ibifumaneka simahla kule webhusayithi iminyaka. Xa i-intanethi iflathiwe, iphepha lilo kuphela ukhetho (kude kube yonke into iphinde ivuleke kwakhona ngocwangco olungqongqo).
Ke andazi ukuba le webhusayithi inokuhlala kwaye isebenza nini. Ungandixhasa ukuze ndiqhubeke; ukwenzela ukuba xa kuvaliwe, ndikwazi ukupapasha incwadi entsha onokuthi uyibambe ngokwasemzimbeni ezandleni zakho kwaye udlulise. Mna nawe singenza utshintsho. Thenga incwadi, funda nokongezwa kwaye bhalisela lencwadana; ngelixa isenokwenzeka. Ndenza konke okusemandleni am ukuba ndiqhubeke ndinxibelelana nawe ngexesha lokuvalwa umlomo okunokwenzeka. Ndikusikelele!
Uludwe lwekhonkco lovimba: cnbc.com
I-Facebook, i-Twitter, umkhosi weendaba ezentlalo kunye nokubeka iliso kuyo yonke ingxoxo
Kutheni uMartin Vrijland eqhubeka nokuthetha malunga ne-pawns yokhuseleko njengo-Robert Jensen, David Icke?
tags: 1 April, Anon, Bojo, Bolsonaro, Boris, lawulwa, intsholongwane ye-Corona, Covid-19, UDonald, eziziimbalasane, lawulwa, I-IMBers, Inoffizielle, Inoffizieller, intanethi, Jair, Janet, Jensen, Johnson, umsebenzi, nenkcaso, nenkcaso, I-Ox-iindevu, Q, Robert, Imidiya yokuncokola, ngexilongo
28 Matshi 2020 kwi-13: 52
Ngenxa yokuhamba kwemikhosi ngaphakathi nangaphandle kwe-US, Mnu. UTrump uya kubhengeza "umthetho wezeMfazwe" ohamba ngaphaya komthetho wokulwa. Ngamafutshane, i-Corona (isithsaba) sisigqubuthelo esihle sokwenza izinto ezininzi ze-ajenda kubandakanya nogonyo olunyanzelekileyo, ukutshitshiswa kwemali, njl.
28 Matshi 2020 kwi-16: 15
inene iZio, kukwakhona ukuziqhelanisa eMadurodam, ngakumbi empuma. Ukongeza, ndeva kunxibelelwano ukuba izixhobo ezinamandla zomkhosi zihanjiswa ngololiwe ziye eJamani ngexesha lasebusuku.
28 Matshi 2020 kwi-16: 30
Ezo zithutha ziya kudibana ne-Defender Europe 2020 yokuzivocavoca, ngokutsho kweendaba ezingekho mthethweni, akunjalo?
28 Matshi 2020 kwi-16: 39
ewe ukuba ndithanda ezinye ezimbalwa… emva koko ezo zothutho kufuneka zihambe ngenye indlela ziye eRotterdam / Antwerp akunjalo? Ukuhamba nge-Hamburg akubonakali kusengqiqweni kum, okufanelekileyo ukomeleza amajoni akhoyo ukuba aye eNtshona njengetha yezokhuseleko nge-Front Front kamva ... yonke into kunye nemephu yomntu wonke.
28 Matshi 2020 kwi-19: 11
Ewe, bayayithetha loo nto. Ndizamile ukulixelela eli bali kwenye indawo. Kwaye nyhani bonke bacinga ukuba uthini uMartin. Ndingathi Vuka. Uya kushenxiswa ngokukhawuleza njengombhali weqhinga lokucinga. Andazi ukuba wenze njani kwaye wazingisa kuMartin. Kodwa isaphetha esinzulu. Into oyithethayo ayinakukhohliswa mntu.
Kodwa ukuba ungene kwiwebhusayithi yakho ngaphandle kokugweba kunye nokukhumbula. Uza kwizigqibo ezininzi. Enye yazo kukuba usondele kakhulu rhoqo. Okanye nje ngokuchanekileyo. Imeko yokulala koluntu iyothusa.
Ukwahlula kunyehlula kuyaqhubeka yonke imihla. Ukudlala nathi. Amanqaku owabhalayo aya kufakwa kwiphephandaba emva nje kwento ethile. Okanye kukho ukudideka ngabom ngabezindaba.
Kuyo yonke imidiya kunye nee-IMBers ezifundayo. Ndiyazi ukuba awuyazi. Kodwa awuyi kuba ngaphandle kwentloni. Thengisa umphefumlo wakho kunye nowokuphantse ube ngabantu bonke kwihlabathi liphela. Kwezinye iipeni zamandla kunye noLusifa obalekayo, uthetha ukuthini ukuba zibubudenge.
28 Matshi 2020 kwi-21: 55
Ukwabona nevidiyo eNew Zealand apho iitanki zazithuthwa ngoonxantathu. Njengoko kuvela, umkhosi we-NZ awunayo itanki elinye. Zivela phi ngequbuliso kwaye zeziphi iinjongo?
MX wabhala wathi:
30 Matshi 2020 kwi-11: 38
ISITYHILELO 13:17 Kwaye akukho mntu wayenokuthenga okanye athengise nantoni na ngaphandle kolo phawu, eyayiligama lerhamncwa elo okanye inani elalimela igama lakhe.
* Imfazwe yesibini:
AmaNazi, ezona zaphuli-mthetho zinkulu: abagwetyi benkampu "ogqirha" "Qhubeka e-USA naseArgentina (isikhundla kwi-Defence Politics Politics njlnjl njl) igama lekhowudi OPERATION PAPERCLIP
Amawaka amajoni aseMelika eVlissingen
Zonke ezo zinto ziye zafumana uqeqesho oluyimfihlo: ukuhambisa amanzi ukuze ahlule. ugonyo kunye nokugabha
ISITYHILELO 14: 9 NO-11.
I-NEPHILIM AGENDA (ye-youtube) IINGXAKI ZABAPHAKATHI-KwiHlabathi liphela kulawulo lweeSathana
BAPHOMET ADERERS abakholelwa kuAdam noEva kodwa!
UAdam noEva kwi-1 BODY !!!!
(Ezi ajenda ziyimfihlo ziqhutywa kangangeenkulungwane!
Ukusuka kwesinye isizukulwana kuye kwesinye isiko, bajika abantwana babo baba NGXESHA LOKUVOTA
Kutheni le nto sonke sibabona abo "" bengekho ngokwemvelo "" bebanda ubuso obubandayo kwiMedia?! Ezopolitiko kunye namagcisa
Amagcisa athanda ukusikhohlisa eBhabheli?! Ziimpawu zendlela!
Khangela! Kumfanekiso wenkululeko! Ayisiyo mfazi! Inesini esahlukileyo
Kanye njengokuba uninzi lweeroy zethu zinabezopolitiko kunye namagcisa alalanayo!
Yinzala yamaNifili yamaGiantsiya (bona iiNefili.
Odluliselwa phambili kwisini esinye? kwaye kwakhona imibala yeRainbow ????
Oku kukunyelisa uThixo!
Jonga imiyalelo eli-10!
Kumaxesha okuphela, oku akunakunqandwa
Aba rhulumente ke uninzi lweeNefili ezisebenzisana nemikhosi yasemhlabeni I-FREEMASONRY eNetherlands (bafunga ngesiko lama-32 kwibhayibhile likaSathana) oku kuqulethe uninzi: I-Burgomasters Oogqirha izibhedlele oonontlalontle bayazikhusela iicawe zabefundisi mos.
Njengasebhayibhileni sisekele uMoses ngokufuziselayo! Sonke sisekele kuMoses! Ukuqhubeka nolwandle UKUYA KWILANDLA ESETYENZELWE!
Uya kuyifumana yonke inyaniso esebhayibhileni
30 Matshi 2020 kwi-12: 05
Hayi, ayikokunyelisa uThixo. Ibhayibhile yincwadi kaThixo… okanye yincwadi eyinxalenye yomdlalo wezinto ezimbini (jonga nakwiKaballah).
Ngamafutshane, uThixo noSathana wasebhayibhile nazo zonke iziprofetho ziyinxalenye yombhalo omkhulu, ingumbono kaLusifa. U-Lusifa ungumakhi wale nto yokulinganisa intsholongwane.
Jonga incwadi yam kwaye endaweni yokunamathela kule ncwadi kaLuciferian kwaye ufumanise ukuba sijongana nentsholongwane kaLuciferian.
Ewe, okuninzi okubhalwe eBhayibhileni kuyinyani; kakhulu malunga nento ethethwa nguAlex Jones (ukuyidweba njengomzekelo namhlanje) okanye u-An An uthi, inokuba yinyani. Ubambisa abantu kuphela ukuba ubasusa ngaphaya kwesikhuselo.
Ukufumana iinyani yokwenyani kufuneka ubuyela kumthombo; hayi kwibhayibhile. IBhayibhile, ngokungathi kunjalo, ziindaba ezingeyonyani: ibonakala ngathi yeyokwenyani, kodwa ngumgibe.
28 Matshi 2020 kwi-15: 36
Ndicinga ukuba inkqubo ye-anti-christ ye-NWO imalunga nokuqalisa ngokucacileyo. Sele uqaphele kwimithombo yemithombo yeendaba ebizwa ngokuba yenye yeendlela ezahlukeneyo zebali le-Q-anon elivelayo. Ngokwesiqhelo hayi ekuhleni. Imithombo yeendaba yeCafe weltschmerz kunye neBlue tiger zikwenze oku ngamandla kule mihla. Zombini zijikeleza ibali elilelinye elifana nelithi: ngentsholongwane ye-corona sinokuqala inkqubo elungileyo, uqoqosho lwabantu lwehlabathi. ilawula, kodwa ekubonakala ukuba wonke umntu ugcina inkcubeko yakhe.
Mhlawumbi xa efumana ixesha kwiipodcasts zakhe uJensen uya kuphinda alijikeleze eli bali lixabisekileyo kunye noTrump njenjongo.
Mhlawumbi inkqubo yolungelelwaniso lwehlabathi elitsha iqala xa sikwiingxaki ezinzulu kwihlabathi liphela ekufihleni kwenkqubo elungileyo apho wonke umntu aya kuba namathuba nalapho uthando, ukunyamezelana kunye nokuchuma kuya kulawula, apho kungasayi kuphinda kubekho ngxaki kwakhona kwaye umchasi-Kristu yiza ukuzazisa nge-transhumanism.
gt1987 wabhala wathi:
29 Matshi 2020 kwi-12: 24
Nam ndicinga ngale nto. uza kumgxeka njani urhulumente obonelela ngeniso esisiseko kwaye uyilungelelanise kakuhle le ngxaki intle kangaka?
akukho nto iphosakeleyo nge-corona, jonga amanani. iinxalenye ezinkulu zabantu ziyahlanjwa ngengqondo.
28 Matshi 2020 kwi-16: 07
Yintoni isinxibelelanisi sovavanyo?
Ngaba ukulinga igama kufanelekile?
Udliwanondlebe usebenzisa igama elinye elinomdla kakhulu kumbuzo wakhe: kwaye NGOKUQINISEKILEYO kufuneka ndibuze imibuzo yakho malunga nentsholongwane ye-corona (ndinyanzelekile ngokomthetho ukuba ndicele iingcinga zakho)
Ngaba ucinga ukuba kutheni efuneka ngokusemthethweni?
Oko akunanto yakwenza nemithetho eyenziwe ngumntu, kodwa yonke into enayo indalo / umgaqo jikelele.
Iwonke "ngokusemthethweni" umntu (Intliziyo, ingqondo, umphefumlo) yenkululeko yokuzikhethela iyinto exabisekileyo yokuzisa into ebomini, iyenze, ibonakalise. Ngubani ofuna ukuba sikhethe ngokuzithandela? Ngubani ofuna kuthi ngokuzithandela anike imvume ethile?
Ngaba siyakholelwa kwaye "siyahamba" siye "kwiingcali?" inkolo entsha yomatshini ngaphezulu komntu.
okanye ngaba sikhetha ukuzazi kwethu okuhle ngobuhle baso size ekugqibeleni sizise amandla ethu okomntu / okomoya ebomini buvela kuthande isazisi sobomi / isazisi / umbono?
Ukukhetha iziphumo ezichanekileyo yile nto sivavanywa kuyo.
Ikwangawo mandla umntu ngamnye ekufuneka ebekelwe ecaleni ukuze ekugqibeleni anikezele ngokuzithandela kuko konke.
Okokugqibela, uDegrasse uxela ngokungqongqo ukuba ayinayo / inike uluvo (malunga nesithsaba), kodwa inqaku lokujonga (indawo yokujonga).
"Umgwebo ogqityiweyo okanye isigqibo kufikelelwe kuso, ngakumbi esi sisekele ubungqina obungavelisi ulwazi okanye ukuqiniseka,"
Uyabelana ngombono wakhe / umbono wakhe / ekuthatha ngokubona kwakhe kwaye enze umzamo wokubambelela okujolise ekwenzeni impembelelo yakho.
Ukucamngca kukusebenzisana phakathi kokucinga kunye neemvakalelo. Ingcebiso yindawo yokubonisa oya kuthi ngayo ugcwalise “izikhewu” kulwazi ngokwakho, kwinkqubo yakho / kwimeko yangaphambili. Yiyo ke intsingiselo yendawo esiyibiza ngokuba 'yindawo engaboniyo'. Yile nto ke ngoku abayisebenzisayo. qaphela kwaye uvule indawo yakho engaboni kwaye uyazi ukuba kwakhona (ukwazi)
28 Matshi 2020 kwi-16: 32
ingaba ingayinto orwellian? Ukwabiwa kwe-Intanethi
Isikali esikhulu se "Intanethi nge-Intanethi" kunokwenzeka, iingcali zilumkisa
28 Matshi 2020 kwi-18: 40
Ihashe leTrojan lihamba ngebhayisikile ngokucothayo kodwa ngaphakathi.
IZiko leMisebenzi eNtsha leSiza esiSebenzayo sisigcawu kwiwebhu yomkhosi
Into yeendaba | Ngo-13/02/2020 | 15: 23
INetherlands ikwanendawo ebalulekileyo yelizwe eYurophu. Oko kuyenza ukuba ibe lilizwe elifanelekileyo lokuhamba. Ii-NATO zibambisene ngakumbi zisebenzisa amazibuko ethu, (amanzi) neendlela zoololiwe ukuhambisa iiyunithi nezixhobo.
28 Matshi 2020 kwi-22: 06
Siyabona nokuba amasebe athile athengisayo (imidlalo, ifashoni, izihlangu kunye nempahla yasekhaya) ayafakwa kuncedo lwezemali kurhulumente. Icebo lobuchule lokuphepha ukudala iqela elikhulu kakhulu elinokumanyanisa. Njengomnini wesicangu okanye ivenkile yemidlalo awuyi kuziva unomdla wokusebenza kunye, umzekelo, umhlaziyi wezilwanyana ofumana inkxaso yemali (kunye nelinye icala). Kananjalo ngale ndlela iphindwe kabini yenziwa kwakhona ukuze kuthintelwe iqela elikhulu kakhulu lababambisi.
Killumimati 777 wabhala wathi:
28 Matshi 2020 kwi-23: 01
Bathandekayo beli Nkululeko,
Enkosi uMartin ngeminyaka yakho yokuzama ukufumana inyaniso. Uye waba ngumfundi onomdla kumanqaku akho kangangeminyaka. Nangona kunjalo, ndiziva ndinyanzelekile ukuba ndenze i-akhawunti kwaye ndibuze le mibuzo ilandelayo.
1) Sibenza njani abantu ukuba babone (er) amandla amnyama adlala emva kweendawo?
2) Singayibhengeza njani “inkcaso elawulwayo”?
3) Singakwenza njani wena, MartinVrijland.nl, waziwe ngakumbi kwaye uqiniseke ukuba abantu abaninzi baqala ukufunda amanqaku akho?
Ukusukela ekuqaliseni kwe-coronavirus, ubonile ithiyori yolwalamano emva kwembali yentlalo. Oku kunefuthe elihle, kuba abantu baqala ukuzibuza kunye neminye (!) Imibuzo ebuhlungu, qaphela ukuba i-MSM isasaza i-disinformation kwaye babonakala beyazi ngakumbi into yokuba kukho izinto ezininzi ezingahambelaniyo. Ngelishwa, emva koko kufuneka sijongane "ne-paw paw yokhuseleko" efana noJensen, othi ngelishwa avakalise iinyani ezininzi (ngelishwa esi sisicwangciso sakhe). Ke, lo mntu unabalandeli abaninzi, kwaye oku kubonakala kukhula mihla le.
Lixesha lokuba abantu basukume! Ukuba baya kuzigqobhoza ngobuxoki obuninzi! Kwaye loo nkcaso ilawulwa! Siya kuyithatha ixesha elingakanani le nto? Zingaphi izinto ezitenxileyo kunye nokuhlangana ekufuneka zize phambi kokuba abantu bavuke?!
Kodwa okona kubaluleke kakhulu, siya kubenza njani abantu ukuba bayazi le nto…
28 Matshi 2020 kwi-23: 10
Ngumbuzo olungileyo. Kule meko, kungayiphi na imeko kuluncedo ukwazi ukuba ngubani na wonke okujikelezileyo odlala abalinganiswa (iiPC) okanye oonobumba abangadlaliyo (ii-NPCs).
Eli nqanaba lokugqibela (ii-NPCs) kulindeleke ukuba liqhubeke nokulandela ingxelo eseburhulumenteni kwaye likhusele ngokuzimela njenge-arhente (i-IMB'ers). Ngelishwa, ngenxa yeminyaka yabo yenkqubo ngaphakathi kwale nyaniso ibubuxoki, abalinganiswa abadlala banomdla kakhulu kuxinzelelo loontanga kwaye ngentsingiselo yincinci (amanani).
Ingqondo yoqobo apho abalinganiswa abadlalayo bayaphiliswa iya kwenza umsebenzi wayo. Ayithethi ngomphumo obonakalayo, kuba ungalibali: phantse yonke into esicinga ukuba siyayibona inikezelwe kuthi ngabalinganiswa abalawulwayo abangadlaleyo ngemidiya yabo kunye nolunye uhlobo losasazo.
Ke ndiyatsho: ndithembe ukuba abalinganiswa bokwenyani bayaphaphama. Kwaye ukuba uyababona aba badlali abadlala kwindawo yakho yangoko (kuba uyabazi), ungabakhomba kumanqaku am kunye nencwadi, ukuze bafumanise ukuba bomelele ngakumbi kunale nto inzima yokulinganisa intsholongwane ebonakala ngathi ayinakuze ibonwe. Unokoyisa, kuba sikwinqanaba elahlukileyo (lasekuqaleni). Ndikusikelele!
29 Matshi 2020 kwi-11: 02
Ndikhe ndacaphuka kakhulu mva nje nabantu abahamba ngakuwe ngearc okanye bakhawuleza bangene xa ufika apho. Ndihlala ndicaphukiswa ngabantu ababonisa ngentetho yabo ukuba balele ngokupheleleyo, kodwa oku kunyuke kakhulu kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo (inyanga) kuba ndifuna kakhulu abantu abaninzi ukuba bavuke ngokwenene.
Oko kucaphukisa ke kuqala ukubiza iindleko ezininzi kwaye uya kugxila ngakumbi okanye ngaphantsi koko. Ndicinga ukuba oku kwakhona (kwinxalenye encinci) yomdlalo wengqondo odlala i-elte.
Enye yeendlela ezisetyenzisiweyo ukusukela ngexesha lokukhumbuza abantu amandla abo kwaye ugxile kwizinto ezingalunganga iyeyantlukwano neqhinga lokuphumelela. Ukuza kuthi ga ngoku, iingcali zenze amaqela abizwa ngokuba ngamaqela, ukuze kamva baphikisane la maqela ngokuchaseneyo ngeendlela zobubi bomdlalo wengqondo nokunye.
Ndiyaqaphela ngoku ukuba kule ngxaki intsha yekona, iqela labantu eliqonda ukuba le ayonyani kangaka kwaye ngubani na oqondayo ukuba kutheni le nto yenziwe (zahlukanisiwe) zinokuba ngaphezulu okanye zincinci zimiswe ngokuzenzekelayo ngokuchasene neqela elilala ngokupheleleyo kwaye yonke into ikholelwa malunga nengozi ye-corona njl.
Ngoku ndigxila, phakathi kwezinye izinto, ukuba xa ndiphuma andifuni ukukhathazeka nganto ngabantu abothukileyo bonke kwaye benze izinto ezibi kakhulu zokuba kude nabanye, ndiyazi oku kuphela trifle kodwa.
Nditsho, endaweni yam (kwindawo ethile eFriesland) ndidibana nabantu bambalwa abangadanga xa ndafika.
Abderrazak Samir wabhala wathi:
29 Matshi 2020 kwi-00: 39
Oku kubangela umdla ukuba kufundwe
29 Matshi 2020 kwi-12: 57
Singavele sigqibe kwelokuba silapha nge-911 v2.0 eyalelekileyo kwi-PsyOp
ukhetho oluncinci ukusuka kwiweets 😉
29 Matshi 2020 kwi-18: 59
Ngaba ngesele sele zishenxisiwe? Akukho nanye yezona zirusi zisezantsi zisebenzayo.
29 Matshi 2020 kwi-14: 14
"Abantu bakufumanisa kunzima ukuzisa ucwangco ngala maxesha angaqinisekanga."
29 Matshi 2020 kwi-14: 50
Ndicaphukiswa kangakanani bububudenge, nobudenge obudlalwa ngabantu, ukulahlekisa nokwenza abanye mnyama. Bala ukuba malunga ne-0,009% yabemi beCorona basulelekile I-32.000 ifile, engaphantsi kwe-0,009% yabemi behlabathi. (Yongezwa ukuba ndiyayikhumbula kakuhle loo nto) Ngokuqinisekileyo andazi nokuba loo mthombo uthembekile na, kodwa leyo yayingeyiyo ingongoma leyo. Emva kwayo yonke loo nto, wasebenzisa loo mthombo. Ndiye ndakhetha i-source yemvelaphi yakhe. Ngequbuliso akukho ngqiniseko ukubala umva ngokuchasene nabemi behlabathi. Ngelixa wawusebenzisa laa mthombo wenzala wanika la manani, awaphuma ngequbuliso. Ukuba, ngokwangaphambili, usebenzisa ilizwe elithile kuphela. Kwaye ukubala umva akunamsebenzi. Babonakala ngathi bakho kuyo yonke indawo uMartin gadverdamme, kufuneka ndiyikhuphe kwangoko. Yayililinge lam lokuqala nelokugqibela. Beka into kwi-FB. Ukuba le ngcinga ndiyayicaphukisa. Kodwa kuyacaca ukuba ayisiyiyo le nto ayiyo.
Kuba ngequbuliso zonke iingcinga zazikho kum, eziyinyani. Bala nje kancinci
Ukuba bendilungiselele ukulungiselela eyona nto imbi kakhulu, bendikhe ndayibhala, kwaye ngequbuliso yayimalunga nezibhedlele ingakumbi i-IC ndingakwaziyo ukunyamezela. Isibakala sokuba umntwana engafanga kwihlabathi liphela akavusi mntu. Awungekhe uyithelekise neCorona, kodwa unako xa isiza ebantwaneni. Kuba kunzima ukubulawa ngumkhuhlane. Akukho mntu ngaphandle kwalapha obona ngendlela engacacanga, kunye nokubonakala okungaqhelekanga kwale ntsholongwane.
Yiyeke ukuba uyikhuthaze le webhusayithi. UMartin ulungile ukuba uyakuhlawula yonke into. Iyothusa le nto.
Ukuba ungene nzulu kuwo, uya kubona izinto ezingakumbi ezingalunganga kwaphela. Uninzi lwabantu alunakukwazi ukucinga ngokusengqiqweni okanye ngokunzulu, ngoko ke ngekhe baphinde bavuke bakopele. Ke ayisiyonto ingako ukuba nexhala malunga noku kuba kukwenza udinwe kwaye udimazeke.
Yonwaba ukuba awuyongomnye wama-99%, kwaye usebenzise ulwazi lwakho nokuba uphaphile ukufumana indlela elungileyo, kwaye ukuba kunokwenzeka, ukuzikhusela wena kunye nabo ubathandayo. Kunokubakho isaqhwithi esikhulu (mhlawumbi esona sikhulu embalini), kwaye uzame ukulungiselela indlela ocinga ukuba yeyona ilungileyo.
29 Matshi 2020 kwi-19: 03
Kwaye eneneni kukhona "abalinganiswa" abaninzi abanesazela okanye bengazi kwaye ngezizathu zehlabathi basebenzisana ukuqhubekisa inkohliso.
29 Matshi 2020 kwi-22: 25
Ingoma ye-rap ka-2013 ebhekisa kuma-2020 (iTrump Storm intro) kunye neCoronavirus, ngokuqinisekileyo oku kuyenzeka.
Jun 21 Ngo-2013
30 Matshi 2020 kwi-11: 34
Nokuba kwi-MSM, sele sikulungele ubuKomanisi bobuchwephesha obuxelwe kwangaphambili nguMartin:
« Ngaba amadoda angatshatanga abalingane abona bantu kujolise kubo kwi-coronavirus? Isiseko sesayensi
I-Coronavirus covid-19 amanyathelo okutshixa okwandiswa ngo-Epreli 6 kwaye aya esiba nzima kakhulu »
Utyelelo lulonke: 2.597.318